HIV ndiro zita rehutachiona uye chirwere chinokonzera.
H = vanhu – vanhu vanozviwana
I = immunodeficiency – inorwisa muviri wako
V = hutachiwana – chirwere chinokuita kuti urware
Ndinowana sei HIV?
Iwe hauzive nekuona mumwe munhu kana vane HIV. Vanhu vanayo vanowanzonzwa vaine utano hwakanaka.
HIV inogara muropa, mvura yepabonde uye chifuva. Iwe unobata HIV kana imwe yei inopinda muropa rako. Nzira dzakawanda dzekuwana HIV dzinobva:
kusashandisa makondomu panguva dzepabonde
kugovana nheyo, sitiroti kana zvipukeni kuti inyore mishonga
kusvinura muviri kusina kuchena uye kutora mifananidzo kana mhemberero
kutarisa ropa-ku-ropa contact eg. kuwedzerwa ropa uye nhengo dzinoputika munyika dzisina kuidzivirira nezveHIV. Kuwedzerwa ropa uye nhengo dzakaputika muAustralia zvakachengeteka kana mitemo yose inotevera.
Iwe haugoni kuwana HIV ne:
kukwezva kana kunyorera
kugoverana zvokudya kana kunwa
kudya zvokudya zvakaitwa nomumwe munhu ane HIV
kuwedzerwa ropa uye dzimwe nzira dzokurapa muAustralia
kushandisa chimbudzi chimwechete kana kushambidza semunhu ane HIV
zvipembenene kana mhuka dzinoruma
kuonana zuva nezuva nevanhu vane HIV
madziva emudihwino kana gyms
Ndine HIV sei?
kugovana nheyo, sitiroti kana zvipukeni kuti injore mishonga
madziva ekudhara kana gyms
Chii chinoita HIV kumuviri?
Utachiona hweHIV hurwisa muviri wako. Mune maune immune system anorwisa zvirwere uye anokuchengetedza kubva pakurwara. HIV inogadzirisa zvirwere zvekudzivirira muviri uye hazvigone kukudzivirira. Kana iwe usina utachiona hweHIV, unogona kurwara zvikuru.
Ko HIV neAIDS chinhu chimwe chete here?
Utachiona hutachiona hunouraya masero ezvirwere mumuviri.
AIDS haisi utachiona.
AIDS ndiyo zvirwere zvisingawaniki kana zvirwere zvinorwisa muviri kana muviri wako wekuzvidzivirira usina simba. Izvi zvinongoitika chete mushure mekutachiwana HIV inouraya akawanda emasero ako ezvirwere. Izvi zvinogona kutora makore akawanda.
AIDS haina kuwanikwa muAustralia nokuti mishonga inogona kuzvidzivirira.
Kuva neHIV hakurevi kuti uchafa kubva kuAIDS muAustralia
Ndinoziva sei kuti ndine HIV?
Nzira chete yekuziva kana iwe une HIV ndeyekutorwa ropa.
• kana muedzo uchiti ‘zvisina kunaka’, hauna HIV
• kana muedzo uine “positive“, une HIV
Vanhu vazhinji havazivi kuti vane HIV nokuti vanonzwa zvakanaka. Asi paunotanga kuwana HIV unogona:
• misoro kutema
• kuvhuvhuta glands
• kupera simba
• kurwadziwa kwemutsipa uye pamwe chete
• Zvironda mumuromo
• zvipembenene pamadzimai
• usiku hunofukura
Asi izvi zvinogona kukonzerwa nehosha, chirwere chakaipa kana chimwe chirwere. Kana iwe uchifunga kuti unogona kuva neHIV unofanira kuona chiremba uye kukumbira muedzo.
Ndingaitei kana ndine HIV pozitivi?
Chinhu chekutanga chekuita ndechekuudza chiremba. Vanogonawo kuronga kuti iwe utaure kune mumwe munhu semupi wezano kana iwe uchida.
Chiremba achakupa mishonga yeHIV. Iyi mishonga ichaita kuti iwe urarame hupenyu hurefu, hune utano. Ko HIV inogona kurapwa here kana kurapwa?
HIV haigone kurapwa asi mishonga inogona kuitora.
Mishonga inoderedza huwandu hwehutachiwana muropa kusvika pamwero wakadzika kudaro, haugone kuonekwa kunyange pasi pe microscope. Tinodana izvi ‘zvisingaoneki utachiona hwehutachiona’ uye zvinoreva kuti hamuzorwara kubva kuHIV uye muchava nemararamiro avanoita. Kana iwe uchiramba uchitora mushonga zvakanaka, zvinorevawo kuti hauzopa HIV kune mumwe munhu.
Ko HIV inogona kurapwa here kana kurapwa?
HIV haigone kurapwa asi mishonga inogona kuitora. Mishonga inoderedza huwandu hwehutachiwana muropa kusvika pamwero wakadzika kudaro, haugone kuonekwa kunyange pasi pe microscope. Tinodana izvi ‘zvisingaoneki utachiona hwehutachiona’ uye zvinoreva kuti hamuzorwere kubva kuHIV uye muchava nemararamiro evanoita. Kana iwe uchiramba uchitora mushonga zvakanaka, zvinorevawo kuti hauzopi HIV kune mumwe munhu.
Ndingazvidzivirira sei kuti ndirege kuva neHIV?
kuongororwa uye kuziva kana iwe kana murume wako wepabonde ane HIV: kana uine anopfuura mumwe wako (kana mumwe wako ane zvepabonde nevamwe vanhu), edzai nguva dzose. Ngozi yekuwana HIV yakakwirira kune vamwe vanoita zvepabonde.
kuongororwa uye kurapwa nokuda kwezvirwere zvepabonde zvinotapukira (zvirwere zvepabonde). Kuva nechirwere chepabonde kunowedzera mukana wako wokuwana HIV kana kuipa kune vamwe vanhu. Bvunza vashandi venyu kuti vaongorore uye varapwa nokuda kwezvirwere zvepabonde zvakare.
Bvunza chiremba wako nezve Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP). PrEP imishonga inokumisa kuti uwane HIV. Iko kune vanhu vasina HIV asi vane ngozi yakawanda yekuitora.
‘Kungozi huru’ zvinoreva:
vanhu vane mukana weHIV
vanhu vane hutano hwevakadzi pamwechete
murume anorara nevamwe varume
vanhu vasingashandisi makondomu nguva dzose
vanhu vanogovana nheyo, sirinesi, mvura uye zviputi kuti vashandise mishonga
shandisa mhando dzisina kuchena (yakachena) mishonga injecting sitiroidzi nemvura: usambogoverana nhumbi dzako nevamwe. HIV inogona kuderedzwa kubva kumunhu kusvika kune munhu kunyange mumadonho eropa maduku kuti aone mune injecting sitiroidzi.
kutora mifananidzo uye kuputika muviri: ingoshandisa studio yakagadziriswa iyo nheyo nezvimwewo zvigadzirwa zvakanatswa kana kukandwa kunze kwekunge zvashandiswa. Nguva dzose iva nechokwadi chokuti vanoshandisa inki itsva kwauri.
• Kuwedzerwa ropa uye dzimwe nzira dzezvehutano: muAustralia ropa rose, zvigadzirwa zveropa uye nhengo dzakaedzwa uye dzakachengeteka. Asi kuwedzerwa ropa, zvibereko zveropa uye nhengo dzingasave dzakachengeteka kune dzimwe nyika.
Ndingaita sei kuti ndirege kupa HIV kune mumwe munhu?
taura nachiremba wako nezvekutora mishonga yeHIV: mishonga yeHIV inoita huwandu hwehutachiwana muropa. Kana uwandu hwehutachiwana hwakanyanya kwazvo, haugoni kupa HIV kune mumwe munhu. Izvi zvinonzi Kurapa sekudzivirira (TasP).
kuongororwa nguva dzose: kunyange kana iwe utora mushonga weHIV, unofanirwa kuongororwa nguva dzose. Kune marudzi akasiyana ehutachiwana hweHIV uye zvinokwanisika kuva nehuwandu humwe hweHIV panguva imwe chete. Mushonga unogona kudikanwa kuchinjwa kana izvi zvichiitika.
kuongororwa zvirwere zvepabonde: mishonga yeHIV haina kukudzivirira kuti usawane zvirwere zvepabonde. Utachiona hweHIV huri nyore kupa (kana kuwana) kana une chirwere chepabonde. Edzai zvirwere zvepabonde nguva dzose uye kurapwa kana muedzo wekutsvaga uri ‘wakanaka’. Wako (s) wako wepabonde anofanira kuongororwa uye kurapwawo.
shandisa kondomu: shandisa kondomu nguva dzose kana uchiita zvepabonde
usabatanidze tsinga, siriniti, spoons kuti uwane mishonga
• Kufukura mwana: Kana uri kutora mishonga yeHIV uye iwe unoda kunwisa mwana wako, taura nachiremba weHIV.
Ndinofanira kutaurira munhu kana ndine HIV here?
Nomutemo unofanira kutaurira:
wako wepabonde kana shamwari yako. Mune dzimwe nyika muAustralia, unofanira kutaurira mumwe wako wepabonde usati waita zvepabonde navo. Nyika imwe neimwe yakasiyana naizvozvo chengetedza usati waenda ikoko.
Hondo yeAustralia. Iwe haugoni kubatana kana une HIV.
kana iwe uri mutyairi wendege
kana ukatenga mamwe marudzi einishuwarenzi sehutano • kana iwe uchida kupa ropa kana nhengo dzakaita seidzo. Iwe haugone kupa ropa kana nhengo kana uine HIV.
Iwe haufaniri kutaurira munhu
Vanhu vamunofanira kutaura ndevokuti:
chiremba wako kuitira kuti vakubatsire pakuedza nemishonga
• mazano kana vamwe vanhu vari chikamu chekutarisira kwako HIV kuitira kuti vakwanise kukubatsira
Kune vakawanda mapoka emagariro eAIDS muAustralia anogona kukupa mazano nekukubatsira iwe.